Joan Laporte Oo Ku Dhawaaqay Kooxdiisa Mashruuca Ee Doorashada Barcelona.
Home Horyaalka Spain Joan Laporte oo ku dhawaaqay kooxdiisa mashruuca ee doorashada barcelona.
Joan Laporta ayaa ku dhawaaqay kooxdiisa mashruuca isboorti ee soo socda ee Barca, hadii loo doorto madaxweynaha barcelona oo la qaban doono bisha soo socta ee Maarso.
Rafael Yuste ayaa hogaaminaya shaqsiyaadka, halka Victor Valdes uu sidoo kale ku lug leeyahay iyo agaasimihii hore ee isboortiga Valencia Mateu Alemany.
Jose Ramon Alexanko, Sergi Barjuan, Pichi Alonso, Xavi Llorens iyo Albert Benaiges ayaa sidoo kale lahaan doona qaybo ay ku ciyaaraan.
Carlos Puyol waxaa lagu daray liiska magacyada, qaab muuqaal ah ayuu sidoo kale muujiyay inuu haysto taageerada Rafa Marquez, Deco iyo Samuel Eto, kuwaas oo ku salaamay inuu yahay \_”madaxweynaha mustaqbalka Barca.
Xavi iyo Iniesta wuxuu yiri: Wax ballanqaad ah kama lihin iyaga, ma doonayno inay dareemaan in la isticmaalo Murashaxa madaxweynaha ayaa gacantiisa ku jira suurtagalnimada inuu keeno iyaga haddii ay doonayaan. Xiriir wanaagsan ayaan la leeyahay iyaga waxaanan eegi doonnaa suurtagalnimada oo dhan.”
Saddexda musharrax ayaa ka doodi doona hadda, marka hore Axadda Hanti-dhowrka 1899 ee Camp Nou. Doodda labaad waxay noqon doontaa Talaadada. Midka ugu dambeeya wuxuu noqon doonaa Jimcaha 5, maalinta ugu dambeysa ololaha, laba maalmood ka hor doorashada Taasi waxay noqon doontaa TV3 ee Camp Nou laga bilaabo 22.10 pm CET .
Previous articleWakiilka haalland oo ka hadlay kooxaha xiiseynaya weraryahankooda.
Next articleMiralem Pjanic oo boos la’aan ka heysato kooxda barcelona.